Ikati lothando leLaPerm | Amakati kaNoti
Isithombe - Marylandpet.com
Uma ungomunye walabo abakujabulela ukuphulula ikati elinezinwele ezisongekile, nge I-LaPerm Ngeke ube nesithukuthezi, kepha kunalokho okuphambene nalokho ngoba uyindoda enekhaya enoboya kakhulu ezenza athandwe zisuka nje.
Futhi, unempilo enhle kakhulu Ngoba akuwona umjaho osetshenziswe kakhulu ngabantu, ngakho-ke ubude bokuphila kwawo bude, buphakathi kweminyaka eyi-15 nengama-20. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngaye?
1 Umsuka nomlando weLaPerm
3 Ikati leLaPerm lingaphila iminyaka emingaki?
4 Ukuziphatha nobuntu
5 Ukunakekelwa kwekati kweLaPerm
5.5 Ukuthandana nenkampani
6 Kubiza malini ikati leLaPerm?
7 Izithombe zekati zeLaPerm
Umsuka nomlando weLaPerm
Isithombe - Eyeem.com
Umsuka waleli kati elihle use-United States, ikakhulukazi ekoloni lamakati angachezuki ayehlala epulazini e-Oregon amagundane okuzingela namanye amagundane. Kwelinye lodoti amazinyane azalwa enezinwele ezisontekile, futhi abanye babo bathathwa umbhangqwana oshadile owakhiwa uLinda noRichard Koehl.
Ngokukhetha nokuwela la makati anezinwele ezisontekile namanye alinganayo, kancane kancane abanumzane baseKoehl baqala ukwazisa ngalolu hlobo lokufuna ukwazi nolungajwayelekile olwavela ngokwemvelo. A) Yebo, Ngo-1997 kwasungulwa iklabhu lokuqala lohlobo lwaseMelika elibizwa nge-LPSA, kwathi ngo-2003 laqashelwa njengomhlanga yi-international feline club iTICA.
Noma kunjalo, namanje akwaziwa kahle, kepha sekuvele kukhona abafuyi eJapan, eNew Zealand noma eNgilandi.
Ikati leLaPerm Ungoboya obumaphakathi naphakathi, obunesisindo esingu-4 kuye ku-6kg. Ikhanda lalo licishe libe ngunxantathu, nezindlebe zimile, namehlo, okungaba yi-alimondi, ophuzi, igolide, okuluhlaza okwesibhakabhaka noma oluhlaza okotshani, ahlukaniswe kahle komunye nomunye.
Umzimba wakho ivikelwe ungqimba lwezinwele ezisontekile ezingaba noma imuphi umbala, noma ngabe iqinile, i-bicolor, i-tricolor, i-chinchilla, njll. Ijazi labo lingaba lide, lifushane, noma libe nobude obuphakathi, kepha lihlala lithambile. Imilenze mide kodwa ilinganiswe kahle.
Ikati leLaPerm lingaphila iminyaka emingaki?
Umjaho awusetshenziswanga kakhulu ngabantu, into evumela ukuthi uphile abambalwa Iminyaka engu-15-20. Kepha ukuze lokho kugcwaliseke ku-feline yakho, kufanele unikeze ngochungechunge lokunakekelwa okuyisisekelo esizophawula ngakho ngezansi.
Isithombe - Askideas.com
I-protagonist yethu inoboya obunjalo uthanda ukucindezelwa. Jabulela ukuhamba nomuntu wakho ngenkathi ubuka ithelevishini noma ngenkathi ulala. Ikona kuthule kakhulu, yize kungenxa yemvelaphi yayo ngaphezu kothando oluningi, kuzodinga ukuzivocavoca umzimba. Uthanda ukujaha izintambo, amabhola, noma amathoyizi agxishiwe ngathi lizingela igundane.
Ukubheka lokhu, kunconywa kakhulu ukuthi kusuka osukwini lokuqala unikeze Amajuji ongazijabulisa naye.
Ukunakekelwa kwekati kweLaPerm
Njengomnakekeli wakho, kunconywa kakhulu ukuthi mnike ukudla okuseqophelweni eliphezulu ukuze ikhule futhi ikhule kahle. Ngakho-ke, kungcono ukubanikeza ukudla kwemvelo (inyama kanogwaja, inyama yenkukhu, njll.), Noma okuphakelayo okungenakho okusanhlamvu ngoba lokhu kungukudla okuvame ukudala ukungezwani emakati.
Nsuku zonke kufanele udlule ikama lekati ukususa izinwele ezifile, futhi ngezikhathi ezithile kufanele uhlanze amehlo nezindlebe nge-gauze ehlanzekile (usebenzisa eyodwa iso ngalinye nendlebe) ngethonsi elithile leso.
Yize kuyikati elizolile, ngoba gwema ukubhoreka kuzodingeka kakhulu ukuthi unikele isikhathi. Isilwane kumele sizivocavoce (play 😉) cishe imizuzu engama-40-60 nsuku zonke, sehlukaniswe ngama-sessions amancane cishe imizuzu eyi-15-20.
Ukuqhamuka kumakati ajwayelekile, impilo yabo ejwayelekile yinhle kakhulu. Namanje futhi namanje empilweni yakho yonke ungaba nesinye isifo, njengemikhuhlane noma umkhuhlane, ngakho-ke njalo uma usola ukuthi uyagula kuzofanele umyise kudokotela wezilwane.
Kuzoba lula futhi ukuya kuchwepheshe ukuze mgome, abeke i-microchip ayeke mthene uma ungafuni ukuthi athole izingane.
Njenganoma yiliphi ikati elijoyina umndeni, lizofuna ukuphathwa ngothando. Ngakho-ke, kulula ukuthi mtshengise ukuthi unendaba kangakanani -ngaphandle kokumcindezela- ukumthinta, ukumlethela ithini lokudla okumanzi ngezikhathi ezithile, nokumvumela ukuthi achithe isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka eceleni kwakho. Ngaphezu kwalokho, ngezikhathi ezithile unganikeza nokuphathwa kwekati (ngaphandle kokusanhlamvu).
Kubiza malini ikati leLaPerm?
ILaPerm Cat yisilwane okuzoba lula ukuthi usithole kubazalisi kunasezitolo zezilwane, ngoba akusilo uhlobo olwaziwa kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, intengo yomdlwane ayiphezulu kakhulu: ezinye 600-700 ama-euro.
Izithombe zekati zeLaPerm
Ubucabangani ngekati leLaPerm? Uma ufuna ukubona izithombe eziningi zalesi silwane esihle, nazi ezinye:
Isithombe - Pickapaw.com
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati lothando leLaPerm
Ungayinakekela kanjani ikati elinenyanga